IBhadi kwibhodi yemozulu - I-Airbnb
IBhadi kwibhodi yemozulu
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguSarah
Ibekwe phakathi kwegadi etyebileyo nedlamkileyo, iBarn yindlu yethu evalwe ngokupheleleyo, ekhethekileyo yeendwendwe. Esi sakhiwo ekuqaleni sasiyindawo yokugcina ifama yamatye aluhlaza kodwa okoko singabanini bepropathi siyiguqule indawo yaba yindlu yeplani evulekileyo, igcwele ikhitshi, igumbi lokuhlambela, indawo enkulu yokuhlala kunye namagumbi amabini okulala e-mezzanine. Ingaphandle ihlala ikwimo yayo yokuqala ngelixa ingaphakathi lihonjiswe ngengqokelela yemifanekiso kunye nezinto ezivela kuhambo lwethu phesheya.
IBarn ijonge ngasempuma ngokukhanya okuhle kwasekuseni okugalela kumgangatho wayo ukuya kwiifestile zesilingi. Ezi ndawo zimbini zabucala zokuhlala zangaphandle ziyilelwe ukuba wonwabe imini yonke kangangoko kunokwenzeka kumaphandle ebhodi yeWeatherboard. Sinentsinjana kunye nedama kwindawo, enendawo yokuhlala emangalisayo yamasele.
Indawo yokuhlala ipholile ngendalo ngexesha lasehlotyeni ngenxa yeendonga zayo ezishinyeneyo zebluestone kwaye iba yindlwane epholileyo ebusika nomlilo uqhubeka.
Ubume besicwangciso esivulekileyo sendlu senza ukuba silungele isibini okanye abahlobo abambalwa abasondeleyo (igumbi kuphela labucala ngokupheleleyo kwindlu yokuhlambela). Siye sahlala amatheko amaninzi esidlo sangokuhlwa kunye neendibano zempelaveki kwaye ishedi ivumela wonke umntu ukuba azive eyinxalenye yolonwabo.
Lo mmandla ubafanele kakhulu abakhweli beebhayisikile. I-Avenue of Honor esihlala kuyo ibaleka malunga neekhilomitha ezingama-25 ukubuya ukuya e-Ballarat, ngokuyinxenye inenkonzo yeetrekhi zebhayisekile kwaye luhambo oluhle kakhulu. Kuzo zonke iindlela zelizwe elizolileyo kwaye kunokwenzeka ukuphonononga ngokubanzi ngebhayisekile.
I-Weatherboard Hill isemva kwethu ngqo kwaye sinofikelelo lokunyukela phezulu ukusuka apho kukho umbono omangalisayo.
'I-Barn' yindawo ekhethekileyo kakhulu, sijonge ukukubamba!
Ibhodi yemozulu luluntu oluncinci kwiAvenue of Honor 25 imizuzu ukusuka eBallarat. Ibhari ikule Avenue yeHonour, ibekwe phakathi kwamadlelo amancinane anombono weLake Learmonth engekho nzulu.
Sisenokungasoloko sikwizakhiwo kodwa siya kuhlala siqhagamshelwa kwaye sonwabile ukukunceda ngalo naliphi na icebiso, iingxaki okanye imibuzo onokuba nayo malunga nepropathi yethu kunye nommandla obanzi. Ukuba ukwindawo yokuhlala, siya kukuhlonipha ngokupheleleyo ubumfihlo bakho ngexesha lokuhlala kwakho.
Sisenokungasoloko sikwizakhiwo kodwa siya kuhlala siqhagamshelwa kwaye sonwabile ukukunceda ngalo naliphi na icebiso, iingxaki okanye imibuzo onokuba nayo malunga nepropathi yethu…